Madaxweyne Obama oo qalbi jab ku tilmaamay xaalada dalka Suuriya – Radio Daljir
Madaxweyne Obama oo qalbi jab ku tilmaamay xaalada dalka Suuriya
Washington,Mar 7 -Madaxweynaha dalka maraykanka ayaa qalbi-jab ku tilmaamay xaalada dalka Suuriya , laakiin waxa uu gaf weyn ku tilmaamay tallaabo militeri oo hal dhinac oo maraykanku ka qaado dalkaasi Suuriya.
Madaxweyne Obama ayaa mar kale ku celiyey in ay tahay in madaxweyne Assad uu dhaco , waxana uu intaa ku daray in ay maraykanka imika la gudboontahay sidii uu uga shaqaynlahaa sidii loo go?doominlahaa nidaamka Assad.
Isla xilligan rabshadaha dhiigu ku daatay ee dalka Suuriya ayaa kor u kacay iyadoo ciidamadu ay wadaan guluf ka dhan ah qolya iska caabinta.
Beesha caalamka ayaa ku kala qaybsan hanaanka loo soo afjarayo rabshadaha Suuriya.
Shirkii jaraa?id ee ugu horeeyey ee uu madaxweyne Obama qabto sanadkan 2012-ka ayuu ku sheegay in ay adagtahay qiimaha uu ku kacayo dagaalku.
Madaxweyne Obama ayaa sheegay in Libya iyo Suuriya aan la isbarbar-dhigikarin,waxana uu tilmaamay in xaalada Suuriya ay tahay mid aad u qalafsan.
Kacaan-wadayaashii Libya ee xukunka ka riday Col Gaddafi ayaa waxaa gacan weyn siiyey gaashaanbuurta Nato , waxana xilliyadii ugu dameeyey soo baxayey dareenka ku aadan in gacan militeri la siiyo xoogaga mucaaradka hubaysan ee Suuriya.
Isniintii Senator-ka Maraykanka ee John McCain ? oo madaxweyne Obama kula loolamay doorashadii sanadkii 2008 ayaa ku baaqay in duqaymo cirka ah loo geysto ciidamada Suuriya si loo joojiyo tacadiyada ay ka wadaan dalkaasi ee dadka badani ay ku dhinteen.